Hiran’Ankizy Tahaka Ny Incy Wincy Spider, Natao Sarimiaina Sy Nadika Ho Amin’ny Fiteny Yoruba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2016 4:41 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, 日本語, Ελληνικά, English
Fantsona YouTube vaovao ny Culture Tree TV izay manova ireo hiran'ankizy malaza amin'ny teny anglisy sy ny hira Nizeriana nentim-paharazana ho lahatsarimiaina amin'ny fiteny Yoruba, mandrisika ny ankizy kely, indrindra ireo monina any am-pielezana mba hianatra ny tenindrazan'izy ireo.
Renim-pianakaviana Nizeriana monina ao London, Gbemisola Isimi, no tompon-kevitra tamin'ny tetikasa raha nahita izy fa mankafy mijery lahatsary ao amin'ny iPad ny zanany vavy 3 taona. Na izany aza, raha niezaka nitady lahatsary tamin'ny tenin-drazany Yoruba i Isimi, dia tsy nahita na inona na inona ny vali-pikarohana tao amin'ny YouTube.
Ka nieritreritra izy hoe maninona raha mamorona lahatsary ny tenany? Araka ny voalaza ao amin'ny teny fampidirana ao amin'ny lahatsary, nahita i Isimi fa mila ‘mitahiry ny lovantsika isika, mila mitahiry ny kolontsaintsika isika, ary mila mitahiry ny tenintsika”, ka nanapa-kevitra hanao izany izy, manararaotra ny teknolojia sy ny tanana lava ananan'ny aterineto.
Noho ny fanampian'ny namana manam-pahaizana momba ny sarimiaina, nanomboka namorona sy nandrakitra lahatsary vaovao izy ary namoaka izany tao amin'ny fantsona vaovao. Izany no fandraisany anjara mba hanomezana antoka ny zanany – sy ny an'ny olon-kafa manerantany – hihazona ny fiavian'izy ireo Yoruba na dia monina an'arivony kilometatra lavitra aza.
Ny Yoruba dia iray amin'ireo fiteny Nizeriana eo ho eo amin'ny 520 ao amin'ny firenena manana kolontsaina sy fiteny maro isan-karazany. Ity no teny be mpiteny indrindra ao Nizeria sy ny firenena mpifanolo-bodirindrina Benin izay ampiasan'ny olona manerantany tombanana ho 20 tapitrisa. Tafiditra amin'izany tarehimarika izany ireo Nizeriana an-tapitrisany maro monina any ivelany. Ahitana fiarahamonina ampielezana marobe ao Londra, betsaka loatra ka fantatra amin'ny anarana hoe “Little Lagos” [Lagos Kely] ny distrikan'i Peckham atsimo atsinanana.
Manampy ny teny mba ho hita kokoa sy mampiala voly ny ankizy kely ny fanatontosàna lahatsary amin'ny teny Yoruba ho an'ny ankizy. Mampiseho hiran'ankizy nadika tamin'ny teny Yoruba miaraka amin'ny dikantsoratra amin'ny fiteny roa ny fantsona YouTube-n'ny Culture Tree, tahaka ny Old MacDonald na “Baba MacDonald” hita eo ambony, na ny Incy Wincy Spider na “Rondo Rondo Alantakun” amin'ny fiteny Yoruba.
Ary ny Bingo the Dog amin'ny teny Yoruba:
Araka ny filazan'i Isimi, ny fanadihadiana nomen'ny YouTube dia mampiseho fa avy any UK, Etazonia, ary Nizeria ny ankamaroan'ireo mpitsidika. Noho ity tetikasa vaovao ity, tsy hahita voka-pikarohana tsy misy valiny intsony ny ray aman-dreny sy ny mpanabe rehefa mikaroka lahatsary fanabeazana amin'ny fiteny Yoruba ao amin'ny YouTube.